लकडाउनमा प्र’दर्शन गरे ६ सय ज’रिवाना देखि ६ महिनासम्म थुन्ने गृहको चेता’वनी!सहि या गलत? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
लकडाउनमा प्र’दर्शन गरे ६ सय ज’रिवाना देखि ६ महिनासम्म थुन्ने गृहको चेता’वनी!सहि या गलत?
काठमाडौ : देशव्यापी रूपमा सरकारवि’रूद्ध सड’कमा प्र’दर्शन हुन थालेपछि गृ’ह मन्त्रालयले कार’बाही गर्ने चेता’वनी दिएको छ। बिग’त केही दिनदेखि वि’भिन्न बहाना वा माग राखेर सा’माजिक स¥ञ्जालबाट सर्व’साधार’णलाई निश्चि’त स्था’नमा जम्मा हुन आ’ह्वान गर्ने,
जु’लुस प्रद’र्शन गर्ने र शा’न्तिपूर्ण धर्ना’का नाममा धेरै व्यक्ति सहभागी गराउने, ज्ञा’पन पत्र दिन जानेजस्ता का\_मप्रति गृ’हले ग’म्भीर ध्या’नाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। गृ’हले लक’डाउन उल्लं’घन गर्नेलाई का’रबाहीको चे’तावनी दिँदै बिहीबार विज्ञ’प्ति निकालेको हो।
Previous पाल्पाको तिनाउ खोलामा कार ख’स्यो,,,,😭😭
Next को,रोना भाइरसले सि’ध्याएको को,रोना सं,क्रमितको फोक्सो फेरियो , सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!